Thwebula 2GIS 3.16.3 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: 2GIS
I-2GIS – isiqondisi senhlangano enebalazwe yedolobha eliningiliziwe kanye nosesho oluphambili. Isofthiwe inehlu olukhulu lwamamephu namadolobha amamephu aseRussia, Kazakhstan, Ukraine, eCyprus, e-Italy, e-Czech Republic, e-UAE, eChile. I-2GIS ibonisa ibalazwe lomuzi oluningiliziwe ongakwazi ukulivakashela futhi lisondeza. Ngokuchofoza okukodwa kwisakhiwo, isofthiwe inikeza ulwazi mayelana nezinhlangano ezikuyo, kubandakanya nenombolo yocingo, ikheli, amahora wokuvula, iwebhusayithi esemthethweni namakhasi kumanethiwekhi omphakathi. I-2GIS iqukethe isiqondisi senhlangano esihlukaniswe ngezigaba, esenza ukuthola izinsizakalo zemoto, iziteshi zamaphoyisa, izishoshovu zobuciko, abalungisi bezinwele, amathilomu, njll. Isofthiwe isekela izici zokuhamba, ingabeka imizila futhi ikuvumela ukuba ubuke wonke amanethiwekhi okuthutha wedolobha ngokubonisa indawo ngqo ye-stop. I-2GIS iphinde isetshenziswe njalo, ngenxa yokuthi ihlale igcina imininingwane yamanje mayelana nezinhlangano zedolobha nokuthutha kwendawo.
Ulwazi oluningiliziwe mayelana nayo yonke inhlangano kwisakhiwo esikhethiwe
Isiqondisi senhlangano esihlukaniswe yizigaba
Izici zomzila nezokuhambisa
Ukulandelana kwezimoto zomgwaqo
Imizila yokuthutha emadolobheni
Amazwana ku 2GIS
2GIS software ehlobene
Garmin Express – umphathi wemishini evela kwa-Garmin. Futhi, isoftware ilanda izibuyekezo zamamephu nokunye okuqukethwe kwamadivayisi.
Isisetshenziswa se-GPS – ithuluzi lokulawula nokucubungula imininingwane ye-GPS. Isoftware iqukethe iqoqo lamathuluzi awusizo futhi ikuvumela ukuthi ushintshanise idatha nezinye izinhlelo zokusebenza noma amadivayisi.
Ithuluzi ukulawula amadivaysi GPS-navigation lakhiwa TomTom. Isofthiwe ikuvumela ukulawula uhlelo lokuhamba futhi athole i ukufinyelela okuqukethwe idivayisi.
The free and fast isiphequluli ukuqinisekisa ukuhlala ukhululekile internet. Isofthiwe kuwuthinta wonke amasevisi web yenkampani Google.
jv16 PowerTools – isethi eyinkimbinkimbi yamathuluzi afaka izinsiza zokulungiselela, ukulawula, ukuhlanza nokwandisa uhlelo.
Lena inethiwekhi yangasese yangasese yokufihla umsebenzi wakho we-intanethi futhi ihambise imingcele yesifunda.